Na dia tsy nahafaty baolina aza ilay Gaboney milalao ao amin’ny ekipan’ny Arsenal Angleterre tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo dia mbola izy ihany aloha no mitarika eo amin’ny filaharana vonjimaika ankehitriny fa efa nahafaty baolina 17 be izao tao anatin’ny lalao 25 nataony. Manaraka azy ao ilay Egypsiana Mohamed Salah sy ilay Senegaley Sadio Mane samy milalao ao amin’ny Liverpool Angleterre avokoa efa nahafaty baolina 15 sy 13 avy (lalao 25). Faha-4 ilay Nizerianina Victor Osimhen milalao ao amin’ny ekipan’i Losc Lille France efa nahafaty baolina 13 ihany koa (lalao 26). Faha-5 ilay Senegaley Habib Diallo milalao ao amin’ny ekipan’ny Fc Metz France efa nahafaty baolina 12 (lalao 26). Faha-6 i M’Baye Niang (Senegaley milalao ao amin’ny Stade Rennais France, baolina 9, lalao 17). Faha -7 i Islam Slimani (Alzerianina milalao ao amin’ny As Monaco France, baolina 9 tao anatin’ny lalao 25). Faha-8 i Andy Delort (Alzerianina milalao ao amin’i Montpellier France, baolina 9 tao anatin’ny lalao 25. Faha-9 i Denis Bouanga (Gaboney milalao ao amin’ny St Etienne France, baolina 9 tao anatin’ny lalao 25 ary faha-10 i Karl Toko-Ekambi (Kameroney milalao ao amin’ny Villareal-OL/Espagne-France, baolina 8 tao anatin’ny lalao 25 natrehany).